Vaovao - Fambolena amin'ny ho avy - jiro fanabeazam-boankazo
Araka ny Technavio, masoivohon'ny fikarohana eny an-tsena, ny tsena manerantany ho an'ny jiro fitomboan'ny zavamaniry dia hihoatra ny $ 3 miliara amin'ny taona 2020 ary hitombo amin'ny taha mitombo 12% isan-taona amin'ny taona 2020, izay midika fa ny fampiharana LED amin'ny fitomboan'ny zavamaniry dia manana tsena lehibe mety hitranga. Noho ny tsy fahampian'ny herinaratra angovo sy ny fihenan'ny tany azo alaina dia niha-nalaza hatrany ny anjara asa sy ny filàn'ny ozinina - afaka manala ny tany izy ireo ary mamokatra vokatra fambolena betsaka kokoa amin'ny tany sy loharanon-drano tsy dia be fako. Ary ny jiro fambolena dia ampahany lehibe amin'izany, zezika maivana no ampiasaina fa tsy zezika simika, loharanom-pahazavana artifisialy no ampiasaina fa tsy tara-masoandro.Ity no lakilen'ny fanatontosana orinasa mpamokatra zavamaniry vokatra be sy be tontolo iainana.
Ny jiro nentim-paharazana nentim-paharazana dia tratra tamin'ny jiro sodium avo lenta, jiro halida metaly ary jiro mampirehitra. Ireo loharano maivana ireo dia voafantina arakaraka ny fahitan'ny mason'ny olombelona ny hazavana, ary ny zavamaniry dia manana fahitana hafa mihinana tanteraka, izay miteraka fandroahana ny ankamaroan'ny angovo, ary ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny zavamaniry dia tsy mazava loatra.
Chlorophyll absorption specra Fihetseham-po amin'ny spectra maso amin'ny olombelona
Ny spectra hampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry dia mifantoka amin'ny jiro manga amin'ny 450nm ary jiro mena amin'ny 660nm. Ny fepetra takiana amin'ny mavo mavo mena sy manga ho an'ny zavamaniry isan-karazany sy ny dingana hafa amin'ny fitomboan'ny zavamaniry dia tsy mitovy ihany koa. Noho ny plastika tsara amin'ny spectral, ny LED dia azo foronina araka ny karazany manokana amin'ny zavamaniry samihafa.
Ny andian-jiro fanaovan-jaza ShineOn dia namokatra vokatra spektrum kendrena mifototra amin'ny karazana zavamaniry samihafa.
Vokatra hazavana monochromatic avo lenta avo lenta.
Azo ampifanarahina amin'ny ankamaroan'ny rindrambaiko jiro hortikultura.
Ankoatr'izay, mba hampifandanjana ny filan'ny fitomboan'ny zava-maniry amin'ny mason'olombelona, ​​ShineOn dia manome spektrum mety amin'ny fambolena trano kely.
ANSI 3500K 7-dingana, Ra90, dia afaka mamaly ny filan'ny jiro isan'andro, Mandritra izany fotoana izany, ny fahombiazan'ny fluide fotônthetika fotom-pototra 2.1umol / J sy ny tahan'ny mena-manga mety dia mahafaly ny fangatahana fitomboan'ny zavamaniry.
ShineOn dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana loharanon-jiro hortikultura avo lenta ary manome vahaolana feno amin'ny fampiroboroboana sy ny fampiharana ny LED eo amin'ny sehatry ny jiro hortikultura.